Aqoon Iswaydaarsi ku Saabsan Maqaamka Caasimadaha Federaalka ee Dunida oo lagu qabtay Muqdisho “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Aqoon isweydaarsigaan ay qabteen Qubarada wasaaradda Arrimaha Gudaha, federaalka iyo dib u heshiisinta Soomaaliya waxa ay ku soo bandhigeen nidaamyda ay ku dhisan yihiin caasimadaha wadamada qaatay nidaamka federaalka ah ee dunida.
Agaasimaha waaxda Federaalka ee wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdinaasir Xaaji oo sharxay nidaamyada kala duwan ee lagu maamulo caasimadaha federaalka waxa uu sheegay jiraan saddex maqaam oo kala ah.
Degmo caasimad federal ah sida Magaalada Washinton ee caasimada Mareekanka.
Magaalo caasimad u ah dowlad goboleed iyo dowladda federaalka sida caasimada dalka Jarmalka ee Barlin.
Magaalo ku dhex taala dowlad goboleed oo ah Caasimad sida magaalada Ottoawa oo caasimad u ah dalka Kanada.
Ka qeyb galayaasha ayaa aragtidooda ka dhiibtay hababka caasimadaha waddama federaalka ah ee dunida iyo sida mid ka mid ah looga tusaale qaadan karo maqaamka Caasimadda federaalka ah Soomaaliya ee Muqdisho.
Agaasimaha Guud ee wasaaradda Arrimaha Gudaha, federaalka iyo dib u heshiisinta Soomaaliya Mudane Cali Maxamed Maxamuud oo soo xeray Aqoon isweydaarsiga waxa uu sheegay in muhiimada ay aheed in wax laga barto nidaamka ay ku dhisan yihiin caasimadaha wadamada federaalka ah ee dunida.
Waxa uu intaa ku daray Agaasimaha Guud inay sii wadayaan wadatashiyada iyo aqoon isweydaarsiyada ceynkani ah si loogu diyaar garoobo sameynta maqaamka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee horyaala Barlamaanka Fedraalka Soomaaliya.
Daawo Sawirrada soo dhaweeynta Madaxweynaha JFS ee Magaalada Asmara